Malaaq si aad ah loo yaqaano oo la dilay iyo howlgalo lagu dabajoogo kooxdii dilka ka dambeeyay oo weli socda.
on September 04 2013 Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay ayaa waxay sheegayaan in habeenkii xalay halkaasi lagu dilay mid ka mid ah malaaqyada halkaasi ku sugan.
Koox aan heybtooda la aqoon islamarkaana ku hubeeysnaa bistoolado ayaa rasaas la dhacay Malaaq Yuusuf Cali Sheekh oo ka mid ah malaaqyada sida aadka looga yaqaano gobalka Bay, kaas oo lagu dilay xilli uu ku sugnaa ilinka hore ee guriga uu deganaa.
Kooxdii dilka Malaaqa ka dambeeysay ayaa waxay isaga baxsadeen goobtaas, waxaana dilkaas ka dib goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano aad u xoogan.
Ilaa iyo haatan lama oga cida sida rasmiga ah uga dambeeysa dilka Malaaqa, waxaana ciidamada ay weli wadaan howlgalo lagu raad joogo kooxihii falkaasi dilka ah ka dambeeysay.
Dadka deegaanka ayaa aad uga naxay dilka loo geeystay Malaaq Yuusuf Cali Sheekh, iyadoona dilalka ceynkaan oo kale ah lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan Xarakada Al-shabaab, kuwaas oo dagaal xoogan kula jira dowladda Soomaaliya iyo kuwa garabka siiyaba.